iPhone Kpọtụrụ Manager: Import / Export / Hichapụ / jikota Kpọtụrụ Mfe
> Resource> iPhone> iPhone Kpọtụrụ Manager maka iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5
Ọ bụrụ na ị kpọtụrụ na ọtụtụ ndị ugboro ugboro, i nwere ike mkpa ihe iPhone kọntaktị etinyere anụ ụlọ nri - Wondershare TunesGo. Ọ na-eme ihe niile n'ihi na gị. Ọ na-ahapụ gị bubata kọntaktị vCard faịlụ (s), Outlook, Windows Live Mail, Windows Address Book gị iPhone, na Anglịkan. Mgbe e nwe nza nke oyiri kọntaktsị na gị iPhone, ị pụrụ ọbụna jikota ha na-enweghị adịkwa ihe ọ bụla.
Download TunesGo inwe a na-agbalị!
Kpọtụrụ manịja iPhone: mbubata / mbupụ / ihichapụ / jikota kọntaktị
Na akụkụ n'okpuru, m ga-egosi gị otú ị jikwaa kọntaktsị na gị iPhone na ala. Ugbu a, ka ina malitere!
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iPhone gị na kọmputa
Nke mbụ niile, wụnye na ẹkedori a kọntaktị manịja iPhone na kọmputa gị. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na windows 10/8/7 / Vista / XP. Jikọọ gị iPhone na kọmputa site na eriri USB. Ozugbo a omume-achọpụta rụọ gị iPhone, ọ ga-egosi ọdịnaya niile na gị iPhone na ekpe kọlụm nke bụ isi window.
Nzọụkwụ 2. Kpọtụrụ njikwa iPhone
Na-ekpe kọlụm, pịa "Ndi ana-akpo" taabụ. Kọntaktị management windo na-egosi na nri panel.
Iji mbubata kọntaktị na iPhone, pịa "Import / Export" button. Na ndọpụta menu, pịa "Import kọntaktị site na kọmputa." Mgbe ahụ, a esiri-ala ndepụta Pop elu. Ị nwere ike mbubata kọntaktị site na vCard, Outlook Express, Outlook 2003/2007/2010/2013, Windows Live Mail na Windows Address Book.
Iji mbupụ kọntaktị, pịa "Import / Export"> "mbupụ niile Ndi ana-akpo" ma ọ bụ "Export kọntaktị ahọrọ". Mgbe ndọpụta ndepụta abịa, ị nwere ike mbupụ na kọntaktị na gị iPhone ebe nchekwa na si iCloud, Yahoo! na Exchange ka ​​otutu / a otu vCard faịlụ (s), Outlook Express, Outlook 2003/2007/2010/2013, Windows Address Book na Windows Live Mail.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị na-ekpebi mbupụ na kọntaktị na gị Accounts, dị ka Exchange, iCloud, Yahoo! na ndị ọzọ na akaụntụ, apụ, ị kwesịrị ịrịba ama na ihe ndekọ na gị iPhone.
Na nza nke na-abaghị uru na kọntaktị na gị iPhone ebe nchekwa na akaụntụ, ị nwere ike ihichapụ ha mfe. Họrọ kọntaktị na i bu n'obi ka ihichapụ. Pịa "Hichapụ". Mgbe ahụ, a rektangulu Pop elu. Pịa "Ee". Nke a na usoro amalite ka ihichapụ kọntaktị ahọrọ.
Ke adianade do, ma ọ bụrụ na ị na-ahụ ọtụtụ oyiri kọntaktsị na akaụntụ na iPhone ebe nchekwa, ị nwere ike jikota ha. Pịa "De-oyiri". Nke a na usoro-amalite ịchọ niile kọntaktị inwe mbipụta. Mgbe ahụ, ndị niile oyiri kọntaktị na-e. Site ndabara, niile oyiri kọntaktị na-ticked apụ. Ọ bụrụ na ị na-achọghị ka jikota ụfọdụ n'ime ha, ị kwesịrị ị uncheck ndị a kọntaktị. Mgbe ahụ, họrọ a egwuregwu ụdị. Mgbe ahụ, pịa "jikota Họrọ" na mgbe "OK".
Ọfọn, na bụ ụzọ na TunesGo ejisie kọntaktsị na iPhone. E wezụga kọntaktị, ị nwere ike nyefee ozi ederede site na iPhone gị na kọmputa. Ọ bụrụ na ị na-ewe ọtụtụ photos na iPhone, ị nwere ike nyefee foto na igwefoto Roll ma ọ bụ ọbụna Photo Library kọmputa gị dị ka nke ọma.